Tilmaama taphoota pirimeerliigii Ingilizii torbee kanaa - BBC News Afaan Oromoo
Tilmaama taphoota pirimeerliigii Ingilizii torbee kanaa
Goodayyaa suuraa Xinxalaan kubbaa miilaa ispoortii BBC Maark Laawuransan taphoota tilmaamuun beekama
Xinxalaan kubbaa miilaa BBC Livarpuuliif si'a 200 hiriiree taphate, Maark Laawuransan, tilmaama taphoota Sanbata, Dilbata akkasumas Wiixata taphatamu lafa kaa'eera.
Erga pirimeerliigiin eegale torban shanaffaarra jira. Haa ta'u malee, Kiristaal Paalaas qabxii argachuu miti galchii lakkoofsisuu hin dandeenye.
Tapha Sambataa kilabii liigiicha Yunaayitid waliin dursaa jiru Maan Siitii yeroo morkatu kuni jijjiiramuu danda'aa?
Siitiin hin injifataa kan jedhu Laawroon, deggaartoota Siitiif oduu gaaariis qaba.
''Galchii baay'ee kan qaban jarri Siitii akka injifatan tilmaamuus, tapha ittisa irratti xiyyeeffate ilaalla,'' jedhe hin yaadu jedha Laawroon. ''Lenjisaan Paalaas, Roy Haadsan nama wanti akkanaa akka mudatu eeyyamu miti.''
Fiilmiiwwan 'Sherlook Holmis' fi 'Kingsmaan' irratti kan hirmaate taatoon beekamaafi deeggaraa Arsenaal Maark Stroong, torban kana tilmaama Laawroo morkata.
West Haam Totanhaam waliin
Totanhaam torban darbe ammas Swaansii waliin qabxii hirate. Ammaan achi tapha sadii walittii aansani dirreen ala qabu. Jalqabbii dadhabaa taasisanis, ga'umsi West Haam torban lamaan darbe agarsiise garuu bareedaa dha.
Leenjisaan Slaavan Biliich tapha lamaan darberraa qabxii afur walittii qabe. Tapha kanarraas waan argatu fakkaata.
Tilmaama Stroong: 1-2
Barnleey Haadarsfild waliin
Jalqabbii bareedaa kan taasisan taphattoonni Haadarsfild, taphni dirreen ala yeroo darbe West Haamin injifataman jijjiiramuu qaba.
Ciminnii Barnley baranaa tapha dirreen alaa - Livarpuul, Chalsii fi Totanhaam - irratti mul'ate. Haa ta'u malee, qe'eetti galchii galchuu rakkatu. Gareen Siyaan Daayish Barnleen, yeroo hundaa qindoomina kan qabuu fi cimaa waan ta'eef isa ammaarratti waan irra aanan natti fakkaata.
Tilmaama Laawroo: 2 - 1
Tilmaama Stroong: 1 -1
Evartan Bornmaawuz waliin
Gaafa Roobii darbe tapha waancaa Kaaraabaawoo Evartan Sandarlaand 3fi 0'n mo'e irratti Guudisan Paarkiin ture. Yeroo dheeraaf tapha hawwataa ta'u baatuus, injifataniiru.
Dadhabinnii Evartan tarii faallaa Bornmaawuzidha - gareen Roonaald Koymaan galchuu baay'ee rakkata, rakkoon jara Cheeriish (Bornmaawuz) garuu isaan dhaabsisuudha.
Sababa kanaaf qabxii hiratuun jedha.
Tilmaama Laawroo: 2-2
Tilmaama Stroomg: 2- 0
Maan Siitii Kiristaal Paalaas waliin
Jalqabbiin tapha kanaa Paalaasiif rakkisaa dha - tapha kana booda Maanchistar Yunaayitid (dirreen ala) akkasumas Chalsii (qe'eetti) morkata.
Siitiin ga'umsa gaarirra jira. Namuu Paalaas tapha Sambataarratti hin milkaa'a jedhe hin yaadu.
Tilmaama Laawroo: 3 - 0
Tilmaama Stroong: 4 - 1
Saawuzamptan Maan Yunaayitid waliin
Saawuzamptan haala gaarirra jiru - tapha shan darbe keessaa lama mo'ani lamammoo qixa bahani.
Yunaayitid taphaan caaluun carraa galchii hedduu akka uumu nan eega.
Tilmaama Stroong: 1-3
Stook Chalsii waliin
Stook Chalsiif cimuu danda'a. Cimina isaanii kilaboota sadarkaa duraarra jiran irratti torban muraasa dura Maanchistar Yunaayitidif agarsiisaniiru.
Chalsiin kubbaa irra aanuun garuu morkiif of qopheessu.
Tilmaama Stroong: 1-1
Swaansii Waatford waliin
Torban darbe Swaansiin Totanhaam waliin taphatee qabxii yeroo hiratu Waatford Siitiif harka kenne. Kilabiin Welsh Swaansiin tapha lama qe'eetti mo'ame. Ta'uus, kilabiin jalqabbii gaarii taasise Waatford hagam cimina akka horate ifa miti.
Leestar Livarpuul waliin
Tapha waancaa Kaaraabaawoo Livarpuul Leestar waliin gaafa taphate sana walakkaa taphaa irratti jarri Livarpuul carraa injifachuu qabaatanis injifataman.
Liivarpuul cimina jifachuu qabaatuus ittisuu irratti rakkoo cimaa qabu. Gama kaanin, jifataan Leestar Jeemi Vaardii yoo taphatti hin deebine carraan Livarpuul bal'ata jedha Laawroon.
Tilmaama Laawroo: 1-2
Biraaytan Niwkaasil waliin
Taphattoonni Niwkaasil taphoota darban sadii mo'uu isaanii beekuus Biraaytan akka isaan qoru garuu nan amana. Taphichi jara Braaytanif liigii keessa turuu fi turuu dhabuudha.
Tilmaama Stroong: 2-0
Arsenaal Westbroom waliin
Galchuu malee West Broom rakkoo ittisuu hin qabani. Tapha kana Arsenaal ni injifata jedheen yaada jechuun Laawroon tilmaameera.
Tilmaama Stroong: 3-1